Global Voices teny Malagasy » Ao amin’ny tanàna iray mitsingevana any Kambodza, manalavitra tsikelikely ny sekoly ny ankizy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Septambra 2019 12:37 GMT 1	 · Mpanoratra VOD Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna
Miala amin'ny sekolin'ny kilonga Kbal Taol mitsingevana any amin'ny faritanin'i Battambang, kaominin'i Koh Chivaing amin'ny alàlan'ny sambo ny ankizy.
Avy amin'ny VOD News ity lahatsoratra  navoakan'i Saut Sok Prathna ity. Ny VOD News dia tranonkalam-baovao tsy miankina any Kambodza, ary averina avoaka eto amin'ny Global Voices ao anatin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Any Kbal Taol, tanàna iray mitsingevana ao amin'ny kaominin'i Koh Chivaing , faritanin'i Battambang , saika miankina amin'ny jono avokoa ny ankamaroan'ny fiveloman'ireo fianakaviana rehetra.
Efa am-perinasa manampy ny fianakaviany hanjono sahady ny ankizy sasany, ny sasany vao kely taona, ary maro amin'izy ireo no manajanona ny fianarany mba handraisana anjara amin'ny raharaham-barotry ny fianakaviana.
Nilaza i Kheng Tikhea fa naniry ny hanohy ny fianarany amin'ny ambaratonga ambony izy kanefa, efatra taona lasa izay, nanajanona ny fianarany tamin'ny kilasy faha-7, mba handehanana manjono. Nanazava i Tikhea, izay efa 18 taona ankehitriny, fa somary nikorontana ireo kilasy nisy azy, izay ny mpianatra sasany ningitrika nandritra ny volana maro tsy voafaritra arakaraky ny vanintaona.
Tsy afaka manenjika ireo mpianatra hafa ny sasany amin'ireo ankizy ary manapa-kevitra ny hijanona ka handeha hiasa. Najanoko noho ny toe-piainana ratsy iainan'ny fianakaviako ny fianarako.
Nilaza i Yi Rith, 43 taona, fa roa ihany amin'ireo zanany enina no mandeha mianatra. Ny iray kilasy faha-7 ary ny iray kilasy faha-12, samy nianatra tany Siem Reap avokoa teo ambanin'ny fanampian'ny fikambanana Koreana iray.
Tsy mandeha mianatra ireo zanako efatra ambiny. Mpitsimpona avokoa izy ireo — na ilay zanako lahy 7 taona aza.
Tsy nisy afa-tsy iray ny sekolin'ny kilonga tety an-toerana, ary “tsy manana ny fahafahana handefa ireo zanakay any am-pianarana izahay,” hoy izy.
Nilaza i Leng Kheng, lefitry ny lehiben'ny tanànan'i Kbal Taol fa miparitaka eraky ny tanàna izany olana izany noho ny fahantrana.
Araka ireo tarehimarika voarakitry ny kaominin'i Koh Chivaing, eo amin'ny 3.000 eo no mponina ao Kbal Taol, ary ankizy eo amin'ny 6 sy 17 taona eo daholo ny mihoatra ny 1.000 amin'izay.
Khmer no maro an'isa ao amin'ny tanàna, tsy toy ireo tanàna maro mitsingevana manerana ny firenena izay feno foko vitsy an'isa.
Nilaza i Tiv Piseth, talen'ny Sekolin'ny Kilonga Kbal Taol — izay manana trano roa fampianarana mitsingevana — fa 500 mahery ny isan'ireo ankizy afaka mandeha mianatra ao amin'ny tanàna saingy 262 ihany no nisoratra anarana.
Amin'izao fotoana izao, 10 fotsiny no mpianany ao amin'ny kilasy faha-6 ary vitsy tamin'izy ireo ihany no nandrasany hiakatra any amin'ny ambaratonga faharoa. Araka ny voalazan'i Piseth, ny ankamaroan'ny taona, ankizy roa na telo afaka fanadinana tao amin'ny Sekolin'ny Kilongan'i Kbal Taol no nanohy ny fianarany, ary tamin'ny taona sasany, tsy nisy nanohy izy ireo.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, nahavita nampiakatra ny tahan'ny fandehanana an-tsekoly manerana ny firenena i Kambodza, avy tany amin'ny 82% tamin'ny 2007 nankany amin'ny 90% tamin'ny 2017. Na izany aza, mbola ahitana ankizy maro manajanona ny fianarany ireo faritra ambanivohitra, indrindra vao vita ny fianarana amin'ny sekolin'ny kilonga.
Araka ny Fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-toekarena tamin'ny 2017  nataon'ny Ivotoerana Nasionalin'ny Antontanisa – Ministeran'ny Fanndrindràna Rafitr'asa, teo amin'ny 89% teo ny isan'ireo fisoratana anarana tany amin'ireo faritra ambanivohitra tany amin'ny sekolin'ny kilonga fa 44% fotsiny tao amin'ny ampahany voalohany tamin'ny ambaratonga faharoa ary 24% tao amin'ny ampahany faharoa amin'ny ambaratonga faharoa.
Nidika fivoarana anefa ireo tarehimarika ireo raha oharina amin'ny 81%, 25%, sy 8% an'ireo mpianatry ny sekolin'ny kilonga, kolejy sy lisea any amin'ny faritra ambanivohitra tsirairay avy tao anatin'ilay Fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-toekarena natao tamin'ny 2017.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Fanabeazana, Dy Khamboly, fa nomen'ny ministera mba ho an'ny rehetra ny fahafahana ara-panabeazana ary nampandrosoiny ny fampidirana ny vahoaka rehetra ho any an-tsekoly. Saingy nanaiky izy fa mbola olana foana ireo tahan'ny fialàna an-tsekoly na eo aza ireo fivoarana vao haingana ireo:
Nahenanay be ny tahàn'ireo fialàna tsy hianatra ary koa ny tahàn'ny tsy fifindran'ny mpianatra. Raha oharina amin'ny tamin'ireo taona tany aloha, tena kely be izany taha izany.
Araka ny fanadihadiana  iray nataon'ny Transparency International tamin'ny 2014, lasa moramora kokoa ny fidirana amin'ny sekoly ho an'ny ankamaroan'ireo namaly, noho ny fiakaran'ny isan”ny sekoly sy mpampianatra ary raha itarina kely kokoa, noho ireo lalana tsaratsara kokoa, hatramin'ny fankaherezana bebe kokoa avy amin'ireo ray aman-dreny ary ny dingana fisoratana anarana moramora kokoa.
Nilaza i San Chey, tale mpanatanteraka ao amin'ny Tambajotra Ho An'ny fandraisana Andraikitra Ara-tsosialy any Azia Atsinanana sy any Pasifika, miorina ao Kambodza , fa mbola marefo amin'ny taham-panabeazana ambany foana ny mponina sasany, indrindra ireo fianakaviana mifindra-monina ary ireo miaina any amin'ny faritra mahantra sy lavitra. Ireo tanàna mitsingevana, matetika onenan'ireo foko vitsy an-isa no tena marefo indrindra amin'izany.
Zava-dehibe ny nanombatombanana sy niatrehana ny antony fototra mahatonga ny ankizy mbola tsy hianatra foana, hoy izy, nanampy:
Mila fepetra hentitra apetraka amin'ireo ray aman-dreny mba hanomezany antoka fa tsy haka ny zanany handao ny sekoly mba hiasa toy ny tantsaha izy ireo.
Nilaza i Hok Ranoa, mpampianatra ao amin'ny Sekolin'ny Kilonga Kbal Taol fa na ireo mpianatra ao aminy aza indraindray miditra sy mivoaka ny lakilasy foana satria sahirana amin'ny fanjonoana, izay manasarotra ny fanenjehana fandaharam-pianarana efa voapetraka.
Matetika vitsy kely ny mpianatra amin'ny fiandohan'ny taompianarana, ary satria mihamaro ireo miditra eny am-pandehanana, efa tavela any aoriana sahady izy ireny, hoy izy.
“Indraindray afaka manenjika izy ireo ary indraindray tsy afaka;” hoy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/24/142974/
 Fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-toekarena tamin'ny 2017: https://www.nis.gov.kh/nis/CSES/Final%20Report%20CSES%202017.pdf